IT Knowledge Archives - Page2Of2- Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
Home » IT Knowledge » Page 2
Domain ဆိုတာကို အရှင်းဆုံးပြောရရင် မြေကွက်လပ်အလွတ်တစ်ခုလို့ မြင်ယောင်လို့ရပါတယ်။ လိပ်စာ အပြည့်အစုံရှိတဲ့ မြေကွက်လပ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင် အဲ့ဒီမြေကွက်ကို ကိုယ့်ဆီ လာမဝယ်မချင်း သူများတွေ ယူလို့မရသလို အဲ့ဒီမြေကွက်ပေါ်မှာပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အိမ်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
Website တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ Website Owner တွေလုပ်ရမယ့် အဓိကထောက်တိုင်ကြီးခြောက်ခု ❗
Website တစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုကို တည်ဆောက်တာနဲ့တူညီပါတယ် ။ အဆောက်အဦတစ်ခုမှာ သူ့ကို ထောက်ခံပေးထားတဲ့ ထောက်တိုင်ကြီးတွေထဲက တစ်ခုအားနည်းသွားတာနဲ့ နေဖို့မသင့်တဲ့ အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး Website တည်ဆောက်ရာမှာလည်း The Six Pillars of Website Development လို့ လူသိများတဲ့ ထောက်တိုင်တွေကို ညီညီမျှမျှအားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။
Website အဟောင်းတွေကို Update မလုပ်ရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်လဲ? Website ဆိုတာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ Online လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုပါ။ လူသိစေချင်တဲ့ Data တွေအကုန်လုံးကို Website ပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းနဲ့ Customer အမြဲ ချိတ်ဆက်မှုရစေလို့ လုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
1. Far Cheaper and Much More Flexible Than Print Advertising The Internet is extremely different from print advertising in that space is cheap, your advertisement is accessible foralonger period of time, the content can be changed without having to ask someone to do it for you (if you useacontent management system) […]
1. What is Search Engine? A search engines isacomputer function that searches data available on the Internet using keywords or other specified terms, oraprogram containing this function.
We are currently preparing data for this page. Please contact 09-431-33843 for more information.